Returns Policy | LOLA
၀ယ်ယူသူလက်ခံရရှိသော ကုန်ပစ္စည်းသည် ပျက်စီးနေခြင်း၊ မမှန်ကန်ခြင်း၊ အပြစ်အနာအဆာများရှိခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပွားခဲ့ပါက သတ်မှတ်ထားသော အချက်အလက်များ၊ ဖြည့်စွက်ပြီး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ပြန်လည်ပေးပို့နိုင်သည်ဟု ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသော ပစ္စည်းများအတွက် လဲလှယ်ခြင်း၊ အစားထိုးခြင်းများ ဆောင်ရွက်မည်မဟုတ်ပါ။
သတ်မှတ်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားနှင့် အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ကုန်ပစ္စည်း လဲလှယ် ခြင်း၊ အစားထိုးခြင်းကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁။ ရောင်းချ၍ပို့ဆောင်ပြီးသော စားသောက်ကုန်နှင့် အဖျော်ယမကာများ၊ ကုန်ခြောက်များ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အလှအပဆိုင်ရာပစ္စည်းများ စသည့် ပစ္စည်းများအား ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်း ကိစ္စရပ်များပြုလုပ်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
၂။ ရောင်းချသူမှသတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းချက်များအတိုင်း ပစ္စည်းပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းကိုဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၀ယ်ယူသူများအနေဖြင့် မှာယူသောပစ္စည်းများအလိုက် ရောင်းချသူသတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းချက်များကို သေချာ စွာဖတ်ရှုပေးရမည်။
၁။ ထုတ်ပိုးမှုမပျက်ယွင်းသော၊ တံဆိပ်ရှိသော၊ ပစ္စည်းအာမခံကတ်ပါဝင်သောပစ္စည်းများ
၂။ (၇)ရက်အတွင်းဝယ်ယူထားသော လူ့သုံးကုန်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများနှင့် ဖက်ရှင်အသုံးအဆောင်များ
3. For Groceries & other consumer goods, we request customer to check carefully for all order upon receiving with delivery team before signing the Delivery Order Form. However, for groceries that is check & accepted by customer are not exchangeable, returnable or refundable.
၄။ အာမခံချက်ရှိသောကုန်ပစ္စည်းများအတွက် အာမခံကတ်ပြားများသည် ကုန်ပစ္စည်းဘောက်ချာနှင့်အတူ ပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အာမခံကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်လာသောကိစ္စရပ်များအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှုစင်တာနှင့် ရောင်းချသူထံသို့ လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။
၅။ ၀ယ်ယူသူလက်ခံပြီးနောက် လဲလှယ်ဆောင်ရွက်မှုများအတွက် သယ်ယူပို့ဆောင်ခများအား ၀ယ်ယူသူမှ ကျခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁။ ၀ယ်ယူသူမှ ၂၄နာရီအတွင်း Lola ၀န်ဆောင်မှုဌာနသို့ဆက်သွယ်ပြီးဆောင်ရွက်ရပါမည်။
၂။ သတ်မှတ်ထားသောဖောင်အားဖြည့်စွက်၍ ပစ္စည်းနှင့်အတူ Lola ရုံးသို့ပေးပို့ခြင်း (သို့မဟုတ်) Lola မှ ပစ္စည်းအခြေအနေစစ်ဆေး၍ သယ်ယူခြင်းများပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၃။ Lola မှ လာရောက်သယ်ယူပေးရန် တောင်းဆိုပါက သယ်ယူပို့ဆောင်ခအား ၀ယ်ယူသူမှကျခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၄။ ပစ္စည်းလက်ခံရရှိပါက ၀ယ်ယူသူထံ ဖုန်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း စာဖြင့်လည်းကောင်း ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းဆောင်ရွက်မှုများအား ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ (ခန့်မှန်းကြာမြင့်ချိန် ၅ရက်မှ ၁၅ရက်)
5. If Lola/ seller fault or error, all shipping fees will be incurred by Lola/ Seller's .
၆။ Lola မှ စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်သောကုန်ပစ္စည်းအား ၃ရက်မှ ၅ရက်အတွင် ၀ယ်ယူသူထံသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ .
၇။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဖြစ်ပေါ်နေသော ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် ကျသင့်သော ၀န်ဆောင်ခကို ၀ယ်ယူသူမှ ကျခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။